I-Indiya yenza iimvavanyo ze-COVID-19, ikhutshelo lokuhambisa linyanzelekile kuyo yonke iBrits
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-Indiya yenza iimvavanyo ze-COVID-19, ikhutshelo lokuhambisa linyanzelekile kuyo yonke iBrits
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Imfuno entsha ibonakala ngathi ingenisiwe ukuphendula kumanyathelo afanayo abekwe kubemi baseIndiya yi-United Kingdom.
I-Indiya yasibiza isigqibo sase-Bhritane sokungasamkeli isitofu sokugonya i-AstraZeneca, esaziwa njenge-Covishield, "esinocalucalulo".
Abemi base-UK abagonyelweyo abafika e-India baya kuxhomekeka kwisinyanzelo seentsuku ezili-10.
Ukuqala ngoMvulo, bonke abafikayo e-UK kuya kufuneka babonise uvavanyo lwe-COVID-19 olubi oluthathe iiyure ezingama-72 ubuninzi ngaphambi kokuhamba.
Ngokubonakalayo okubizwa ngokuba yi-tit-for-tat, amagosa oMphathiswa Wezangaphandle e-India namhlanje abhengeze ukuba bonke abantu base-UK, kubandakanya abagonywe ngokupheleleyo, bayakufakwa kwi-10 yeentsuku ezigunyazisiweyo xa befika e-India.
Imfuno entsha ibonakala ngathi ingenisiwe ngokuphendula ngokufanayo amanyathelo abekwe kubemi baseIndiya yi-UK.
Isibhengezo somgaqo-nkqubo esitsha siza emva kokuba uNobhala Wezangaphandle wase-India u-Harsh Vardhan Shringla ebize isigqibo se-Bhritane sokungayamkeli inguqulelo ye-India I-AstraZeneca isitofu sokugonya, esaziwa njenge-Covishield, "sicalucalulo".
Umphathiswa wayelumkise ngamanyathelo okuphendula xa iLondon isilele ukuqwalasela.
Ukuqala ngoMvulo, bonke abafikayo base-Bhritane- nokuba bakulungele na ukugonywa- kuya kufuneka babonise uvavanyo olubi lwe-COVID-19 oluthathe iiyure ezingama-72 ubuninzi ngaphambi kokuba bemke, baphinde bavavanywe okwesibini xa befika kunye nolwesithathu kwiintsuku ezisibhozo kamva.
Ixesha elinyanzelekileyo lokuvalelwa kwabantu kwiintsuku ezili-10 liya kunyanzeliswa, ngokutsho kwegosa lomphathiswa wezangaphandle.
Urhulumente wase-Bhritane ubhengeze kwinyanga ephelileyo ukuba uza kuvumela abagibeli abagonywe ngokupheleleyo ukutsiba ukuhlala bodwa kwaye bathathe iimvavanyo ezimbalwa, kodwa kuphela kukugonywa okugunyazisiweyo phantsi kweenkqubo zaseMelika, zaseBritane okanye zaseYurophu okanye abo bagunyaziswe liqumrhu lezempilo elivunyiweyo.
Ngaphezulu kweshumi elinamazwe aseAsia, iCaribbean kunye neMbindi Mpuma ayenzileyo kuluhlu, kodwa Indiya Inkqubo ayibandakanywanga. Kwakhona, akukho nkqubo yamkelweyo.
Uninzi lwamaIndiya lugonyiwe lwenziwe ngamaIndiya I-AstraZeneca izithonga, eziveliswe liziko laseSerum laseIndiya. Abanye bafumene i-COVAXIN, iyeza lokugonya elenziwa yinkampani yase-India engasetyenziswayo eBritane.
Ukwala kwe-Bhritane ukwamkela izatifikethi ezithile zokugonya kukhokelele kwinkxalabo yokuba kunokubangela ukuthandabuza kokugonya.
Amazwe afumene amakhulu amawaka eedosi zokugonya i-AstraZeneca kurhulumente wase-Bhritane ashiyeka ezibuza ukuba kutheni iinkqubo zabo zokugonya zazingalunganga emehlweni omboneleli wakhe.